Donald Trump: Sidee xilka looga qaadi karaa madaxweynaha Mareykanka? - BBC News Somali
Image caption Dimuqraaddiyiinta ayaa u xusul duubaya in xilka laga qaado madaxweyne Donald Trump
Hase yeeshee, sidey arrintaas ku dhici kartaa? Yaase horay xil ka qaadis loogu sameeyay? Jawaabaha su'aalahan waxaa laga yaabaa inay aad kaaga yaabiyaan.
Image caption Qaabkee mooshin looga keeni karaa Madaxweyne Trump?
Waxyar sug, muxuu yahay murankan ku saabsan Trump iyo Ukraine?
Kii ugu dambeyay wuxuu ahaa Bill Clinton, madaxweynihii 42-aad ee Mareykanka - wuxuuna mooshinka xil ka qaadista la kulmay ka dib markii lagu helay inuu ku xadgudbay habsami u socodka hannaanka caddaaladda.
Image caption Markii ugu dambeysay aqalka wakiillada Mareykanka wuxuu mooshin xil ka qaadis ah ka keenay - Bill Clinton - sanadkii 1998-kii
Image caption Si ka duwan Mr Trump, qiimeynta heerka maamul wanaagga madaxweynenimo ee Mr Clinton waxay ku shareerneyd cirka. Sawirka waxaa ka muuqda Clinton, xaaskiisa Hillary iyo hoggaamiyaha tirada laga badan yahay ee aqalka wakiillada Dick Gephardt
Xaqiiqdii, madaxweynaha kale ee mooshinka xil ka qaadista ah laga keenay wuxuu ahaa Andrew Johnson, kaasoo muddo afar sano ah xilka hayay intii u dhaxeysay sanadihii 1865 - 1869, wuxuuna ahaa madaxweynihii 17-aad ee soo maray Mareykanka.
Haddii xitaa Trump laga soo gudbiyo mooshin xil ka qaadis ah... malaga yaabaa in xafiiska laga eryo?